★မြန်မာ့အလင်း★: တောသား၂ယောက်မှ သင့်ကို အလိုရှိသည်
၂၀၁၀ နှစ်သစ်တွင် ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒအမြစ်ဖြုတ်ရေးသည် ငါတို့ မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ (ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ကရင်စသည့် တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါသည်) တာဝန်အဖြစ် အဓိဌာန်ပြုရပေမည်။ လူ့လောကတွင် တချို့ကိစ္စတွေကို သည်းခံခွင့်လွှင့်သင့်က သည်းခံရမည်။ ဥပက္ခာပြုသင့်က ဥပက္ခာပြုရမည်။ အဲဒါတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ သို့သော် မွတ်ဆလင်ပြဿနာသည် ဥပက္ခာပြုရမည့် ကိစ္စမဟုတ်။ သည်းခံခွင့်လွှတ်ရမည့် အရာလည်းမဟုတ်။ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို တခြားဘာသာ များနှင့် တန်းတူထား စဉ်းစားလို့မရပါ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စသာဖြစ်ပေသည်။ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ငါတို့၏ မြင့်မြတ်သည့် မြန်မာ့မြေမှ လုံးဝကို အမြစ်ဖြုတ်ရပေမည်။ ထိုနည်းမှလွဲ၍ တခြားရွေးခြယ်စရာနည်းလမ်းလုံးဝမရှိ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့် အချိန်မှာ အခြောက်တွေလို ကြောက်လန့်နေလို့မရ။ စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်တာလုပ်ရမည်။
ကျုပ်တို့တောသားနှစ်ယောက်မှာ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကျွန်ကုလားတွေကို တိုက်ခိုက်သွားဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အကူအညီလိုပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေဟာ မိမိစာမေးပွဲအောင်ဖို့၊ မိမိအလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့၊ မိမိချမ်းသာ ကြီးပွားရေး၊ မိမိအရောင်းအ၀ယ်၊ မိမိ ရာထူးတိုးတက်ရေး စတဲ့… စတဲ့.. မိမိကိစ္စတွေကိုပဲ 24/7 လုပ်နေတာ မှန်ကန်ရဲ့လား ပြန်လည် သုံးသပ်ကျပါဦး။ အတ္တသမားတွေ ဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါရဲ့လား? တစ်နေ့ကို တစ်နာရီ ကျုပ်တို့ တင်ပြတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းလိုက်နာဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ တစ်နာရီဆိုတာကလည်း ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ မောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ကူညီဖို့ စည်းရုံးပေးပါ။ ဘယ်လိုလဲ? ကျုပ်တို့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေ ပရဟိတ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အများအကျိုးအတွက် ကျုပ်တို့နဲ့ လက်တွဲမလား?
ငါကရခိုင်မိုလို့ ဗမာတောသား ၂ ယောက်နဲ့ လက်မတွဲချင်ဘူး . . . . . . . ငါက ကချင်မိုလို့ ဗမာတွေကို မယုံဘူး . . . . . . . ငါက ကရင်မိုလို့ . . . . . . . ငါက မွန်မိုလို့ . . . . . . . ငါက ပအို့မိုလို့ . . . . . . . ငါက ကယားမိုလို့ . . . . . . . ငါက ရှမ်းမိုလို့ . . . . . . . ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးအမြင်နဲ့ ဘေးကနေ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အဖြစ်ဆက်လုပ်မလို့လား? ဒီမယ်ကျုပ်တို့က ခေါင်းဆောင်နေရာကို ယူထားတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာလူမျိုးထဲက (ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ပအို့ ၊ ပလောင် ရခိုင်အားလုံးကို ရည်ရွယ်သည်) ဘယ်သူမဆို ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းချပြနိုင်ရင် တပည့်ကောင်းပီသစွာ နောက်ကလိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။
ရှေးမြန်မာလူကြီးတွေရဲ့ အဆုံးအမလေးဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ပျက်ပြယ်ခြင်း အကြောင်း (၃) ပါးကို နှလုံးသွင်း၊ သတိမူဖို့ ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
၁။ ဗဟုနေတ္တာရ- နည်းညွှန်လမ်းပြ အကြီးအမှုး လုပ်လိုသူပေါများခြင်း။
၂။ သဗ္ဗပဏ္ဍိတမာနီ - မိမိကိုယ်ကို ပညာရှိဟု ဘ၀င်မြင့်သူများခြင်း။
၃။ ဗဟုမဟိစ္ဆာ - ရာထူးမက်မောသူများခြင်း။
ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း ကျုပ်တို့ပြောချင်တာ ရှေ့က ဦးဆောင်မယ်ဆိုရင် လာခဲ့ပါ။ တကယ်လို့ ရှေ့ကမလုပ်နိုင်ရင် နောက်ကနေ နေပါ။ ကျုပ်တို့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။ (လူမျိုးရေးမာနတွေ မေ့ပျောက်ထားပါ။ အသက်အရွယ်နဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေလည်း မေ့ထားပါ) ဘေးကနေ ထွက်ပြီး ပွဲကြည့်ပရိသတ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် ကျုပ်တို့မြန်မာအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကဲ… ဘယ်လိုလဲ? တောသားနှစ်ယောက်နဲ့လက်တွဲမလား? သင့်မောင်နှမ၊ သင့်မိတ်ဆွှေတွေကို မွတ်ဆလင်အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့ စည်းရုံးပေးမလား? ဖြေပေးပါ။ ကျုပ်တို့နဲ့ လက်တွဲနိုင်မယ့်သူတွေ ကော်မန့်မှာ စာရင်းပေးပါ။ ကျား/မ/ လူကြီး/လူငယ်/ မြန်မာ/တရုတ်/ကုလား မခွဲခြားဘူး။ အားလုံးလက်တွဲနိုင်တယ်။ (မွတ်ဆလင်အဖြစ်ဖြုတ်ခြင်းသည် ကုလားကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကုလားကို လူမျိုးရေအရ ဆန့်ကျင်ရလျှင် ဆရာတော် ဦးဆန်းလွင်ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရမည်။ သာကီဝင်မြတ်ဗုဒ္ဓခေတ်မှ ကုလားရဟန္တာ နှင့် သူတော်ကောင်း တွေကိုပါ ဆန့်ကျင်ရမလိုဖြစ်နေပါသည်)
တကယ်လို့ ဘယ်သူမှ ကော်မန့်မှာ စာရင်းမသွင်းရင်လည်း စောက်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ စာရင်းသွင်းသူ နည်းရင်လည်း စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။ အဲလိုဖြစ်လို့ အားငယ် စိတ်လျှော့ပြီး ဘာမှ မလုပ်ပဲနေမယ့် လူစားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ၂ ယောက်ကတော့ ဘယ်သူမှ မကူညီလဲ လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်မှာပဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ တာဝန်ကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်မှာပဲ။ ကျုပ်တို့ ဘလော့ ထောင်လာတာ ၂ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ကျုပ်တို့ စိတ်ထားနဲ့ ရပ်တည်ချက်လည်း သတိပြုမိလောက်ပြီ။ ကဲ. . . . အကြမ်းမဖက်ပဲ အနုနည်းနဲ့ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို မြင့်မြတ်သည့် မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ အမြစ်ဖြုတ်ရာမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ကူညီမယ်ဆိုရင် . . . . . ကော်မန့်မှာစာရင်းသွင်းပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:25 AM
စာရင်းသွင်းလိုက်သည် အသင် နေမျိုး....